"Intii aan dhiman lahaa anigoo sariir jiifa, waxaan doorbiday inaan dadkeyga Soomaaliyeed caawiyo" - BBC News Somali
Dad badan ayaa ninkan u aaminsan inuu yahay halyeey
Magaalada Minnesota ee dalka Maraykanka waxaa xisaab ka dhiga macallin Soomaaliyeed oo dhaayihiisu aysan waxba arkin.
Macallinkan ayaa sheegay in uu ka dhago adaygay sida ay Soomaalida qaar u fikiraan ee ah in qofka lixaadkiisu uu kala dhiman yahay uusan waxba qabsan karin.
"Maadaama oo Illaahay aqoon isiiyay waxaan jeclaystay intii aan anoo sariir jiifa dhiman lahaa in aan dhinto anoo dadkayga caawinaya, intii la idhihi lahaa indhoolaad tehee iska fadhina waxaan go'aansaday in aan cilmigii illaahay isiiyay dadka ugu deeqo". Ayuu yiri Cabdiqaadir Maxamed Aadan oo ku magac dheer macallin Xiito.
Inkastoo aysan arrin sahlan ahayn in macallin uu noqdo qof aan waxba arkin, haddana in uu xisaab dhigo ayay dad badan u arkeen arrin mucjiso ah.
Haddaba macallin xiito oo waraysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa ka warramay si uu arrintaas u maareeyo.
"Dadka qaarkood waxay i waydiiyaan waad indho la'dahee sideed wax u dhigtaa? Dadkeena waxaa ka maqan qofku hadduu indho la' yahay, cilmigu indhaha kuma jiro ee maskaxda iyo caqliga ayuu ku jiraa,"
Wariye Siyaad Siciid Saalax oo waraystay macallin Xiito ayaa waydiiyay sida uu ku ilaaliyo akhlaaqda ardayda da'da yar, wakhtiga iyo waliba sida uu ula socdo kuwa su'aalha qaba.
"Waxaan samaystay tilmaamo aan ku hago ardayda, tusaale ahaan marka aan istaago sabuuradda horteeda waxaan dhahaa 4x9 (afar lagu dhuftay sagaal) oo ka dhigan hala aamuso qofkastana afka ha qabsado. Haddii uu qof rabo in uu su'aal i waydiiyo waa in uu dhahaa 3x8, sababtoo ah haddii uu ardaygu gacanta taago ma arki karo" ayuu ku jawaabay macallin Xiito.
Siduu xisaabta ku bartay?
Cabdiqaadir Maxamed Aadan ayaa xisaabta bartay oo macallin ahaa ka hor burburkii dawladdii kacaanka ee Soomaaliya.
Dad uu wax soo baray ayaana heer sare ka gaaray waxbarashadada.
"Macallin Xiito habka uu wax u dhigi jiray waxay ahayd hab uu u jilcin jiray kuwa aan xisaabta jeclayn ama ku fiicnayn" ayay tiri Dr Saxarla Jaamac oo cilmi dhakhtarnimada baratay kana hawlgasha Minnesota, balse uu macallin u soo noqday bari samaadkii.
Macallin xiito hab baristiisii cajiibka ahayd araggiisa ma aysan raacin balse carruur Soomaaliyeed oo uu si mutadawacnimo ah xisaabta u baro ayay isbdal wayn ka muuqataa sida uu BBC-da u sheegay Faarax Xuurshe.
"Labo wiil oon dhalay ayaan u keenay, markii ay lix bilood dhiganayeen ayaan iskuulkooda ku laabtay, waxaana la ii sheegay in maadooyinkii ay D-ka haysteen in midda ugu hoosaysa ay B+ ka haystaan" ayuu intaas ku sii daray Faarax.
"Wax aad cajiib u ah iyo hibo eebe bixiyo weeye nin araga la' oo marka uu sabuuradda soo istaago aad is leedahay ninkan waxba ma qabo." Ayuu yiri Faarax oo aad ugu riyaaqay tayada macallinimo ee Xiito.